KIA , SORENTO , 2014 , YGN – Super Seven Stars
KIA , SORENTO , 2014 , YGN
Warranty Expiry Date -
KIA , SORENTO ကားသည် Engine power 2.2 L / Diesel /6 Speed Auto Transmission ဖြစ်ပြီး Luxury Grade /7ယောက်စီး ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်…….
KIA Pre Owned Car ကားများအား ဝယ်ယူလိုပါက လက်ငင်းငွေချေစနစ် (သို့မဟုတ်) ( ၁ ) နှစ် မှ ( ၃ )နှစ် အထိ အရစ်ကျစနစ် ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ကားတန်ဖိုး၏ ၃၀% ပေးချေပြီး ကားအား ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်….
စွမ်းရည်မြင့်မားပြီးပိုမိုကြံခိုင်သော Design အပြင်အဆင်များဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော KIA Sorento ၏ Front View Design ကို အလွယ်တကူခံစားသိရှိနိုင်ပါသည်။
KIA Sorento သည် Engine 2200 CC CRDi Diesel ဖြစ်သောကြောင့် မိသားစုနှင့်အတူ အဆ င်ပြေစေသော ကားအမျိုးအစား တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
KIA Sorento ၏ဆီစားနှုန်းမှာတစ်ဂါလံလျှင် ပျမ်းမျှ 21 မိုင်နှုန်းအထိမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ထိုင်ခုံများမှာLeatherSeatsများဖြစ်သောကြောင့်ရိုးရိုးclothsseatsထက်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာ သွားလာနိုင်သည့်အပြင်မတော်တဆ ကားပေါ်တွင် ဖိတ်စင် စွန်ထင်းခြင်းများကို အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်င်ခြင်းနှင့် အနံ့အသက် ဆိုးများထွက်ခြင်း မှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Dual-Zone full auto climate control System သည် ကား၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့် ညာဘက်ခြ မ်းတို့ကို အပူချိန်ကွဲပြားစွာ ထိန်းချုပ်မှုပေးထားနိုင်သည့်အတွက် ကားတစ်စီးထဲတွင် အဲကွန်း၏ Temperature ကိုလိုသလို အရှေ့အနောက်၊ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီ ထားရှိအသုံးပြုနိုင်သေြာေ ကာင့် အအေးဒဏ်မခံနိုင်သူ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် အအေးနှစ်ခြိုက်တတ်သူ လူငယ်များ အတူတ ကွစီးနင်းရာတွင် အဆင်ပြေမှုများကို ရရှိစေပါသည်။ထို့အပြင် ကားနောက်ခန်းသို့လည်း Rear Air conditioning Vent မှတဆင့် Air Con လေပေးနိုင်သည့် window နှစ်ပေါက်ပါရှိပါသည်။
Auto Defog Systemသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲ မှုကြောင့် ရှေ့လေကာမှန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း၊ မှန်ရေငွေ့ ရိုက်ခြင်းများကို အော်တိုမစ်တစ် ကြည်လင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောကြောင့် အန္တရာယ် ကင်းရှင်း စွာမောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
အဆင့်မြင့် Button Starter ဖြစ်သောကြောင့် သာမန် Key များကဲ့သို့သော့တံဖြင့်လှည့်ဖွင့်စရာမ လိုဘဲ အလွယ်တကူခလုတ်နှိပ်ရုံဖြင့်စက်နိူးစက်သတ်နိုင်ပါသည်။
6SpeedAutomaticTransmissionအပြင်ManualTransmissionတွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သေြာေ ကာင့်ကုန်းအမြင့်အတက်အဆင်းများ နှုင့် ခရီးသွားတောင်တက်လမ်းများတွင်လည်းအဆင်ပြေေ ချာမွေ့စေမှာဖြစ်ပါသည်။
Steering wheel ၏အနေအထားကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး (comfort)ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ပုံမှန် Steering wheel အနေ အထား (Normal)ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Steering ကိုအနည်းငယ်ေ လးသော(Spot)အနေအထားဖြင့်သော်လည်းကောင်း မိမိစိတ်တိုင်း ကျပြု လုပ်နိုင်သော Mode Selection လဲပါရှိပါတယ်။
Electric Stability Control System သည် Wheel Speed Sensor နှင့် Steering Angle Sensors တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်ကားလက်ကိုင်၏ တည်ငြိမ်မူ နှင့် မတော်တဆဖြစ်ခြင်း မှကြိုတင်ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ဆောင်းတွင်းအခါနှင့်မြူဆိုင်းသော အချိန်များ၌ကား မောင်းနှင်ရာတွင် ရှေ့သို့ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်နိုင်ရန် နှင်းခွဲမီး ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် – 09 977 333 999 ,09 969 933 637 , 09 969 933 649 , 09 969 997 415 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်…….